Xakameynta tamarta -
Nalalka UV-da ee lagu nadiifiyo biyaha
XADGUDUBADA Xakamaynta - SINGER
QALABKA KONTOROOLKA - MUUQAALKA 106/206-PR VALVE VALVE
Cadaadiska yareynta cadaadiska wuxuu kufiican yahay haynta cadaadiska saxda ah ka hooseeya galka. Waalka ayaa ka jawaabaya cadaadiska nidaamka hoose ee isku xirka marinka waalka iyo nidaamka tijaabada ee ka jawaabaya isbeddelada yar ee cadaadiska wuxuuna hagaajiyaa booska valve isagoo isku hagaajinaya cadaadiska dusha sare ee diaphragm-ka.
Waxay ku haysaa cadaadiska saxda ah ka hooseeya galka
Wuxuu si dhakhso leh oo wax ku ool ah u falceliyaa
VALVEKA KONTOROOLKA - MUUQAALKA 106/206-PR-48 VALVE DIIDAYNTA OO LAGU SAMEEYO YAR OO SOO DHAWEYN
Cadaadiska xad dhaafka ah ee yaraynaaya waalka ee socodka qulqulka yar waa cadaadis toos ah oo shaqeynaya oo yaraynaayo waalka oo isbarbar socda, oo ku habboon codsiyada leh xaddidaadaha booska. Xaaladaha socodka socodka oo hooseeya, marinka weyn ee xididka ayaa laga xirayaa wadooyinka wareegayana waa furnaanayaan, iyaga oo xakameynaya cadaadiska qulqulka eber iyadoon keenin gariir gariir.
Waxay socodsiisaa socodka qulqulka illaa eber
Qaadashada iyo cadaadiska lagu kalsoonaan karo
Kufilan rakibaadda dhaadheer
Eeg alaabada kale:
Jardiinooyinka iyo xarumaha ciyaaraha
Xuquuqda daabacaadda Waterpoint © 2020
Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya
Naqshadaynta iyo hirgelinta: pixelsperfect.pl - bogagga shabakadaha Poznań